के प्रेमको पनि जात हुन्छ र ? प्रेम गरेर विवाह गरे,छोरो पनि जन्माए,अहिले दलित भनेर श्रीमानले छो डेर हि डे - ABNews Nepal
के प्रेमको पनि जात हुन्छ र ? प्रेम गरेर विवाह गरे,छोरो पनि जन्माए,अहिले दलित भनेर श्रीमानले छो डेर हि डे
Nov 26, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, kapurbot tv, latest khabar, latest nepali song, latest ramailo samachar, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
झापा जिल्लाको राजगढकि अम्बिका दर्जी काठमाडौमा दिदिसगैँ बस्दै आएकी थिइन । दिदिसगँ बस्ने क्रममामा दिदी बसेको घरबेटिका आफन्त रत्नमान श्रेष्ठसगँ उनको चिनजान भयो । रत्नमान अम्बिकक बसेको घरका घरबेटिका आफन्त भएको कारण उनी त्यहाँ प्राय आउने जाने गर्ने गर्दथे । त्यसरी आउने जाने क्रममा चिनजान भएका उनिहरु बिस्तारै एक अर्कासगँ प्रेम सम्बन्धमा रहन थाले । करिव ३ वर्ष अघि उनिहरुले प्रेम बिबाह गरि काठमाडौमै कोठा लिएर बस्न थालेको अम्बिकाले बताईन
रत्नमानको घर काठमाडौको माकबारी नै भएता पनि अन्तरजातीय बिबाह गरेकक कारण उनको परिवारसगँ बोलचाल भएन । त्यसैले उनिहरु फाल्टै बस्दै आएका थिए । बिबाह पछि मजदुरी काम गर्दै आएका रत्नमान र अम्बिकाको सम्बन्ध राम्रोसगैँ बित्यो । तर गत लकडाउन देखि भने आफुहरुको सम्बन्ध बिगरिएको अम्बिकाले बताएकी छिन । प्रेम बिबाह गरेर बसेका उनिहरु अहिले सम्बन्ध बिच्छेदको स्थितिमा पुगेका छन । अम्बिकाका अनुसार अहिले आफुलाई श्रीमानले छोडेर गएको बताउछिन ।
बिबाह गरेदेखी रत्नमानको परिवारसगँ कुनै बोलचाल तथा आउजाउ नै थिएन । तर गत लकडाउनबाट भने श्रीमान घर गएको अम्बिकाले बताईन । श्रीमान घर गएर आए पछि भने आफुहरुको सम्बन्ध बिगरिएको अम्बिकाले बताईन । श्रीमान घर गएर आए पछि आफुलाई दलित भएको भन्दै तलाईँ बिबाह गरेर म मेरो घरमा बस्न नपाएको भन्दै झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने गरेको अम्बिकाले बताईन । अहिलेसम्म एक पटक पनि आफुलाई घर नलगेको अम्बिकाको भनाई छ ।
उनिहरुको अहिले दुई वर्षका एक छोरा पनि छन । आफुहरु बसिरहेकै कोठामा आफुलाई छोडेर श्रीमान घर गएर बसेको र एक महिनादेखि आफुसगँ सम्पर्क पनि नभएको अम्बिकाले बताईन । श्रीमानले आफ्नो नम्बर फोन नलाग्ने बनाएको उनले बताईन । श्रीमान घर गएपछि सासुसगँ कुरा गरेर आफुलाई छोड्न खोजेको उनले बताईन । सासुले पनि आफुलाई फोन गरि विभिन्न अपशब्द बोल्दै गाली गरेको अम्बिकाको भनाई छ । साथै श्रीमानका दिदिहरुले पनि आफुलाई धम्की दिने गरेको बताईन ।
आफुले प्रहरीमा पनि उजुरी गरेको तर श्रीमानले अदालतमा डिभोर्सका लागि मुद्दा दर्ता गरे पछि प्रहरीले पनि अदालतमा मुद्दा परेकोले आफुले केही गर्न नसक्ने भन्दै फर्काएको अम्बिकाको भनाई छ । अहिले उनका श्रीमान रत्नमान भने आफू अब अम्बिकासगँ बस्न नसक्ने भएको भन्दै आफुले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकोले अदालतले जे निर्णय गर्छ आफू त्यही मान्न तयार भएको बताए । साथै उनले छोराको जन्मदर्ता पनि अहिले नबनाउने बताए । अम्बिकाको भनाई अनुसार उनिहरुको बिबाह दर्ता पनि नभएको जनाईन ।
भिडियो हेर्नुस :- https://youtu.be/ZK3QaFVf5AM
आफ्नै भाउजूसंग राती रंगे हात प,क्राउ परे देवर,सुत्केरी श्री,मती र छो,रीको बि,जोग बनाएर यतिस,म्म गरे